Gịnị bụ Enterprise Tag Management? Gịnị Mere I Ji Kwesị Ime Ihe Nlekọta Njikwa? | Martech Zone
Verbiage nke ndị mmadụ na-eji na ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịme mgbagwoju anya. Ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu gbasara mkpado na ịde blọgụ, ikekwe ị pụtara ịhọrọ okwu ndị dị mkpa na isiokwu ahụ mkpado ya ma mee ka ọ dị mfe ịchọ na ịchọta. Njikwa mkpado bụ teknụzụ na azịza dị iche iche. N'uche nke m, Echere m na ọ bụ emezighituri aha ya ... it's ma ọ ghọọ ndị nkịtị okwu ofụri ụlọ ọrụ otú anyị ga-akọwa ya!
Gịnị bụ Tag Management?
Nkpado saịtị na -agbakwụnye ụfọdụ mkpado edemede n'isi, ahụ, ma ọ bụ n'okpuru otu saịtị. Ọ bụrụ na ị na -agba ọtụtụ nyiwe nyocha, ọrụ nnwale, nsughari ntụgharị, ma ọ bụ ọbụna sistemụ ọdịnaya siri ike ma ọ bụ nke ezubere iche, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile ka ọ ga -achọ ka ị tinye edemede n'ime ndebiri isi sistemụ njikwa ọdịnaya gị. Sistemụ njikwa akara (TMS) na-enye gị otu edemede iji tinye na ndebiri gị wee nwee ike ijikwa ndị ọzọ niile site na ikpo okwu ndị ọzọ. Usoro njikwa mkpado na -enye gị ohere iwu igbe ebe ị nwere ike iji amamihe hazie mkpado ịchọrọ ịhazi.
na- enterprise nhazi, njikwa nkpado na-enyere ndị ahịa ahịa, otu imewe weebụ, ndị otu ọdịnaya na ndị otu IT aka ka ha rụọ ọrụ na-enweghị onwe ha. N'ihi ya, ndị ahịa dijitalụ na-ere ahịa nwere ike itinye ma jikwaa mkpado na-enweghị mmetụta ọdịnaya ma ọ bụ ndị otu imepụta… ma ọ bụ nwee ịrịọ ndị otu IT. Na mgbakwunye, nyiwe njikwa njiri mara ọrụ na-enye nyocha, nnweta, na ikikere achọrọ ntinye ngwa ngwa ma belata ihe ize ndụ ndị dị na ya agbasa saịtị ma ọ bụ ngwa.
Hụ na ị gụrụ ọkwa anyị na ntinye njikwa mkpado ecommerce, na ndepụta nke 100 mkpado dị oke mkpa iji kesaa ma tụọ mmekọrịta ndị ahịa gị na omume ịzụta.
Kedu ihe kpatara azụmahịa gị kwesịrị iji jiri usoro njikwa Tag?
Enwere ọtụtụ ihe kpatara ị ga - eji chọọ itinye a sistemụ njikwa njikwa n'ime arụmọrụ gị.
na- gburugburu ụlọ ọrụ ebe usoro, nnabata, na nche na-egbochi ndị na-ere ahịa ka ha tinye edemede dị mfe na CMS ha. Arịrịọ ịgbakwunye, dezie, melite ma ọ bụ wepu saịtị na mkpado na mkpado nwere ike igbu oge gị ike jikwaa gị ahịa mgbalị. Usoro njikwa tag na-agbazi nke a n'ihi na ị kwesịrị itinye naanị mkpado site na sistemụ njikwa mkpado gị wee jikwaa ndị ọzọ niile na sistemụ ahụ. Kwesighi ịrịọ arịrịọ ọzọ nye ndị otu akụrụngwa gị!
A na-akwado usoro njikwa Tag netwọk nnyefe ọdịnaya ndị bụ incredibly ngwa ngwa. Site na ịrịọ otu arịrịọ maka ọrụ ha wee tinyezie ihe ederede n'ime saịtị gị, ịnwere ike belata oge ibu ma wepụ ohere na saịtị gị ga-oyi ma ọ bụrụ na ọrụ ahụ anaghị agba ọsọ. Nke a ga - abawanye ọnụego ntụgharị ma nyere gị aka njikarịcha njin ọchụchọ gị.
Usoro njikwa Tag na-enye ohere zere mkpado ederede abụọ, na-eme ka nha nke ziri ezi nke njirimara gị niile.
Usoro njikwa Tag na-enyekarị kwupụta ma pịa njikọta jiri ngwọta niile ị na - eji na - akpado websaịtị gị. Ọ dịghị mkpa maka tọn oyiri na pasting, dị nnọọ abanye na-eme ka onye ọ bụla ihe ngwọta!
Ọtụtụ sistemụ njikwa njikwa etolite ma na-enye azịza siri ike maka nyocha nkewa, ule A / B, ule di iche iche. Chọrọ ịnwale isi okwu ma ọ bụ onyonyo ọhụrụ na saịtị gị iji hụ ma ọ na-abawanye njikọ aka ma ọ bụ pịa-site na ọnụego? Gaa n'ihu!
Systemsfọdụ usoro nchịkwa mkpado ọbụna na-enye ike ma ọ bụ ezubere iche ọdịnaya nnyefe. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịgbanwe ahụmịhe saịtị gị ma ọ bụrụ na onye ọbịa ahụ bụ onye ahịa yana atụmanya.
10 Elele nke Tag Management
Nke a bụ nnukwu infographic nke uru iri kachasị nke njikwa mkpado maka ndị na -ere ahịa dijitalụ si Nabler.
Ntanetị Tag Management Systems (TMS) nyiwe
Ndị na-esonụ bụ ndepụta nke enterprise njikwa njikwa, Dị njikere ilele vidiyo na ụfọdụ n'ime ndị a maka ịmatakwu banyere ike nke njikwa mkpado na usoro njikwa tag.
Mwepụta Platform Adobe Ahụmịhe - Trygbalị ijikwa nkedo ndị ahịa nke teknụzụ niile na nchịkọta ahịa gị nwere ike ibute nsogbu. Ọ dabara nke ọma, E wuru Launch Platform Launch site na API nke mbido mbụ, nke na-enye ohere maka edemede iji rụọ ọrụ ntinye teknụzụ, bipụta akwụkwọ ọrụ, nchịkọta data na ịkekọrịta, na ndị ọzọ. Ya mere, ọrụ ndị na-eri oge nke oge gara aga, dị ka njikwa mkpado weebụ ma ọ bụ nhazi SDK mobile, were obere oge - na-enye gị njikwa kachasị na akpaaka.
Kwalite - Jikwaa gị niile na-ere na mkpado na data site na otu kensinammuo interface, featuring ihe karịrị 1,100 turnkey ere integrations. Gbanwee ma hazie isi data data gafere na teknụzụ na ngwaọrụ iji chụpụ ROI dị ukwuu site na nchịkọta teknụzụ gị na-agbanwe site na njikwa njikwa ihe data.
Nkume Google Tag - Google Tag Manager na-enye gị ohere ịgbakwunye ma ọ bụ melite mkpado weebụ gị na ngwa mkpanaka, mfe na n'efu, mgbe ọ bụla ịchọrọ, na-enweghị bugging ndị IT.
Ọnụ ego IQ - Tealium iQ na-enyere ndị otu aka ijikwa ma jikwaa data ndị ahịa ha na ndị na-ere MarTech gafee weebụ, ekwentị mkpanaaka, IoT, na ngwaọrụ ejikọrọ. Onwe ya na ihe ilekota nke over 1,300 turnkey na-ere ihe njikọta enyere site na mkpado na API, ị nwere ike iwepụta ma jikwaa mkpado ndị dị mfe, nwalee teknụzụ ọhụrụ, na n'ikpeazụ weghara nchịkọta teknụzụ ahịa gị.
Tags: adobe ahụmahụ igwe ojiiAdobe ahụmahụ n'elu ikpo okwuadobe launchingAdobe Managerileba anyaenterprise njikwa njikwaonye njikwa aha njirimara enterprisenjikwa faili googlenjikwa mkpadonyiwe njikwa njikwasistemụ njikwa njikwatelium iqtms